Nahaliana an'i Chiang Mai ~ Journey-Assist- fitaterana. Attractions. Ny lakozia
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Nahaliana an'i Chiang Mai
Chiang Mai dia manana ny toeran'ny "renivohitra voninkazo" any Thailand. Io tanàna io dia tena mampiavaka azy amin'ny habetsaky ny voninkazo, izay mampiseho azy amin'ny fitafian'ny mponina eo an-toerana, ny maritrano ary ny toetra eo an-toerana.
Chiang Mai dia tanàna iray voahodidina tendrombohitra any avaratr'i Thailand. Niorina tao amin'ny 1296 ary hatramin'ny 1558 dia nanana ny toeran'ny renivohitr'i Thailand, ary koa ny foibe ara-kolotsaina sy ara-pivavahana any avaratry ny firenena.
Ho an'ny mpizahatany maro, dia Chiang Mai lasa tanàna ankafizin'i Thailand. Manodidina azy io dia misy saha maro tsy manam-petra miaraka amin'ny voninkazo misy alokaloka samihafa. Voninkazo avy eto no alefa any ivelany. Fa ny voninkazo dia tsy izay rehetra mahavariana an'i Chiang Mai. Tena sarotra ho an'ny mpizahatany ny mankarary azy, satria feno tanàna ny tanàna.
Ary koa, Chiang Mai dia matetika ampiasaina ho fitaterana fitaterana lakana mankany amin'ireo ala manaraka na any amin'ireo vohitra mipetraka manodidina ny foko. Any Chiang Mai ny tenany dia misy tsangambato ara-tantara sy toerana mahavariana izay horesahina eto ambany.
Ho any Chiang Mai izahay
Fitateram-bahoaka any Chiang Mai
Sakafo ao avaratr'i Thailand
Nahaliana an'i Chiang Mai
Tempolin'i Doi Suthep
Tranom-pirenena ao Chiang Mai
Tempolin'i Chiang man
Tempolin'i Chedi Luang
Tempolin'i Pra Sing
Tempolin'ny volafotsy Wat Sri Suphan
Temple Burmese Vas Sai Mung Muang
Tempolin'ny masoandro an'i Wat Bupparam
Mozean'ny bibikely sy zava-mahagaga
Ahoana ny hahatongavana any Chiang Mai
Misaotra ny rafitra mandroso fitateram-bahoaka any Thailand ny mankany Chiang Mai dia tsy sarotra.
Ho any Chiang Mai avy any Bangkok
Avy any Bangkok mankany amin'ity tanàna ity, misy fomba telo:
Bus - avy 400 baht
Fiaran-dalamby - 570 baht
Fiaramanidina - 1000 baht
(Vakio bebe kokoa ny fomba hahatongavana any Chiang Mai eto)
Ao anatin'ny Chiang Mai dia afaka mihodina ao amin'ny tuk tuk ianao, hira miakanjo ary rickshaws amin'ny fitsangatsanganana.
Songteo ao Chiang Mai
Songteo ao Chiang Mai Mena, fotsy, mavo, volomboasary, manga ary maitso; ny lalana tsirairay dia samy manana ny lokony. Ny vidin'ny dia mankany amin'ny songteo dia 25 baht. Sangteo ao Chiang Mai dia somary hafa kely amin'ny an'ny Sangteo, izay tapaka amin'ny lalana ao Pattaya, Phuket, Bangkok. Any Chiang Mai dia manana seza mpandeha mihidy izy ireo kokoa
Sangteo mena ao Chiang Mai
Red sangteo - ny fahita indrindra amin'ny tanàna ary manompo amin'ny làlan-dàlana lehibe ampiasain'ny mpizahatany.
Sangteo mavo oriented-oriented amin'ny faritany: Chom Thong, Wiang Kalong, Wiang Diva Divao, Mae Rim, Doi Saket, Mae Wang ary San diva Tong
Orange sangteo Avaratra atsinanan'ny faritany Chiang Mai - Distrikan'i Fang
Blue sangteo - faritany Lamdivhun
Green sangteo - faritany avaratra atsinanan'i Mae Jo
Sangteo fotsy - Mae Taeng, Doi Suthediv, San Kam.
White Songteo, izay miaraka amin'ny isa 1, dia mandehandeha amin'ny lalana eo anelanelan'ny gara sy ny afovoan'i Chiang Mai. Saingy tsy hiantso eo amin'ny toerany izy, fa mifantina mpandeha eo amin'ny fijanonana eo amin'ny arabe mifanila - Charoen muang rd.
Ahoana ny fampiasana serivisy Santgeo
Flight Sangteo mety ho tratra eny amin'ny farany, na amin'ny lalana manaraka. Mijanona izy ireo na aiza na aiza, na inona na inona izy io dia ajanona.
Voalohany, mila mandeha any amin'ny mpamily ianao. Asehoy na lazao hoe aiza ianao no mila, ary raha manaiky izy, dia farito ny vidiny.
Raha ekena dia alao toerana malalaka eo an-damosina ary mitondra fiara.
Tokony handoa ny fandoavam-bola
Tsy maintsy dinihina ihany koa izay sangteo mena mety ho an'ny karazana roa.
mivezivezy. Izy ireo dia nivezivezy mafy tamin'ny lalana nalehany noho ny sarany raikitra. Amin'ny takelaka fanoratana, ho toy ny fitsipika, ny teboka tafahoatra amin'ny lalana dia voasoratra
Taxi miendrika. Miasa amin'ny fitsipiky ny fiarakaretsaka iray izy ireo, ka tsy misy afa-tsy ny tsy fitovian-dry zareo afaka mitondra olona be dia be, manangona azy ireo eny an-dalana ary hanitsy ny lalana mifanaraka amin'ireo izay mandroso. Tsy raikitra ny sarany ary ekena ny mpandeha isaky ny mandeha.
Tuk Tuk ao Chiang Mai
Tuk tuk dia malaza kokoa noho ny songteo. Fahaiza-manao - mpandeha 2. Telo farany. Any Chiang Mai, hita na aiza na aiza any amin'ny toerana fivorian'ny fizahan-tany izy ireo. Manakaiky ny fizika samihafa, ny garan-dalamby sy fitateram-bahoaka Hafa ny loko samy hafa, ary tsy toy ny sangteo, tsy miankina amin'ny hoe vonona ny handeha.
Ny saran-dalana amin'ity karazana fitaterana ao Chiang Mai ity dia voafaritra amin'ny halaviran-toerana ary eo anelanelan'ny 40 ka hatramin'ny 100 baht raha ao an-tanàna, ary ny 150+ raha mivoaka ao ivelany ianao.
Raha ny amin'i Santteo, ny serivisy tuk-tuk dia mihoatra ny 2.5 heny. Fa amin'ny ankapobeny, miankina amin'ny fahaizany ny fahalalanao, satria ireo dia tranga fotsiny ihany rehefa mifanentana amin'ny fifanarahana.
Ao amin'ny tuk-tuk dia mahasoa fa ianao mandoa ny tuk-tuk manontolo, fa tsy mandoa an’ilay olona. Izany hoe raha roa na roa na telo ianao dia avy eo ny ara-toekarena mankany amin'ny tuk-tuk dia marina.
Mazava ho azy fa misy taxi ao amin'ity tanàna ity. Ho an'ny asa manokana, ny serivisy Taxi-Meter. Any Chiang Mai dia tsy dia betsaka loatra ny isan'izy ireo toy ny any Bangkok na Pattaya, fa mbola ampy ihany. Any amin'ny faritra misy ny gara Auto sy DZ no tena hita maso.
Taxi-metatra. Chiang Mai Taxi Meter
Ny taxi dia misy metatra iray tsy holavinin'izy ireo ampiasaina :).
Ity no fitateram-pitaterana lafo vidy indrindra, mazava ho azy avy amin'ny fisian'ny fametrahana mari-pana rivotra, tsara, ary amin'ny ankapobeny dia avo kokoa ny faran'ny fampiononana noho ny tuk-tuk sy santgeo. Ny vidiny dia eo amin'ny antsasaky ny sandan'ny vidin'ny tuk-tuk. Fa miankina amin'ny fahaiza-manaonao ihany koa.
Ny bisikileta kirihitra
Tsy dia nampiasaina ela tao Bangkok, Pattaya, Phuket ary tanàna hafa ny posikety bisikileta, fa mbola misy Chiang Mai. Ary fahitana bebe kokoa izany noho ny fomba fitaterana mahomby!
Mpitaingina bisikileta ao Chiang Mai
Raha resaka resaka hafainganam-pandeha dia tsy haingana loatra noho ny mpandeha an-tongotra iray, ary azo antoka fa tsy mora fatratra toy ny bisikileta na bisikileta mahazatra.
Ny vidin'ny serivisy ataon'izy ireo dia ampitahaina amin'ny vidin'ny serivisy tuk-tuk.
Ny foibe gastronomic ao avaratr'i Thailand
Chiang Mai dia foibe gastronomic any Thailand. Ny fomban-drazana Thai avaratra dia manjaka eto. Afaka mahita trano fisakafoanana ampy ianao manana fisafidianana tsara ny lovia vegetarian, ary koa ny trano fisakafoanana izay manampahaizana manokana amin'ny hazan-dranomasina. Betsaka ny toeram-pananganana miompana amin'ny fahandroana tandrefana fa tsy Thai. Ao amin'izy ireo no ahitanao ny hamburger, pasta, pizza ary lovia mahazatra mahazatra an'ny Eoropeana, Amerikanina ary Slavic.
Bazaar iray afovoan'i Chiang Mai, izay atao ny alahady, dia manangona ireo mpanamboatra asa tanana avy amin'ireo tanàna eo akaikiny, mpivarotra antitra ary mpivarotra entana amin'ny tanana, fa manomana makàka isan-karazany ihany koa izy ireo manoloana ny mpividy.
Sakafo haingana 'Chiang Mai' sakafo haingana - saosin'i Chiang Mai. Amidy any amin'ny toerana maro izy ireo amin'ny vidin'ny 30 baht isaky ny fanompoana. Ary ity ampahany ity dia ampy hahazoana ampy azy.
Nahaliana an'i Chiang Mai. zavatra hita
Tempolin'i Doi Suthep (Wat Phrathat Doi Suthep)
Ity tempoly ity, iray amin'ireo tempoly be fanajana indrindra any avaratry ny firenena, ary iray amin'ny malaza indrindra any Thailandy.
Tamin'ny 1383 izy io no naorina. ary heverina ho iray amin'ireo Tempoly tranainy indrindra any Thailand. Raha mitambatra, izy dia iray amin'ireo mahafinaritra!
Ity tanàna ity dia tsy ao amin'ny tanàna ihany, fa 15 km miala an'i Chiang Mai, any an-tendrombohitra Doi Suthep, amin'ny haavon'ny 1073 metatra ambonin'ny haavon'ny ranomasina. Noho izany, ankoatry ny zava-misy fa ny tempoly mihitsy dia manaitra eo amin'ny hatsarany, panorama tsara tarehy nataon'i Chiang Mai ary ny manodidina dia misokatra ihany koa avy ao.
Raha mitsidika an'i Doi Sutep dia afaka mividy fitsangatsanganana any amin'ireo masoivoho mpivezivezy ao an-tanàna ianao (vidiny - avy amin'ny 700 baht).
Fa ny fitsangatsanganana mahaleo tena dia ho mora vidy kokoa. Ny fidirana amin'ny tempoly dia 30 baht.
Azonao atao ny miakatra aminy amin'ny alàlan'ny fiara an-tariby, mety hividy 20 hafa koa izy.
Ny fomba fiasa sy ny mpandrindra ny tempoly
Misokatra isan'andro ny tempoly. from 5.00 to 21.00.
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - ny https: //goo.gl/maps/1Wi429XXgXGJTUjh9
Adiresy - 9 หมู่ ที่ 9 Distrikan'i Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50200, Thailandy
Telefaona - + 66 53 295 003
Tranom-pirenena ao Chiang Mai (Museum Nasional Chiang Mai)
Ny tranom-bakoka dia ahitana fitambarana enti-manan-trano sy sangan'asa kanto avy any avaratr'i Thailand sy ny fanjakana tranain'i Lanna taloha. Tranom-bakoka malalaka izy io, ny gorodona roa izay manana fampirantiana ampy hanomezana mpitsidika ny fampahalalana momba ny toetran'ny firenena tamin'ny andro taloha.
Anisan'ireo fampirantiana, misy ny toerana tena sanda ara-tantara, ny entana ao an-tokantrano ary kolontsaina. Firavaka, fanaka, kojakoja anatiny, harona, akanjo, fitaovam-piadiana sy ny maro hafa.
Ny museo dia tsy manana fomba ultramodern hanaovana fampiratiana. Tsy misy mpitari-dàlana sy fakantsary fampahafantarana, tsy misy hafa amin'ny fiteny anglisy, na dia hita ao amin'ny annotations aza, dia somary ratsy saina ihany.
Saingy na izany aza dia mendrika ny fijerena akaiky ireo izay tsy dia liana loatra amin'ny tantara ny tranombakoka.
Ny fitsidihan'ny tranombakoka
Ny fidirana dia mendrika 100 baht. Na ny olon-dehibe na ny ankizy
Tsy misy kafe na fivarotana souvenir ao amin'ny tranom-bakoka.
Fomba fandidiana. Fampahalalana mifandray
Ny tranombakoka dia eo amin'ny manodidina ny Wat Chet Yot, any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Chiang Mai
Misokatra ny tranom-bakoka manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 16 ny andro rehetra afa-tsy ny alatsinainy sy talata.
Address: 451 ถนน ซุปเปอร์ ไฮ เว ย์ เชียงใหม่ - ลำปาง Chang Phueak, Distrika Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50300, Thailandy
Tranonkala ofisialy http: //www.finearts.go.th/chiangmaimuseum/
telefaonina: + 66 53 221 308
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/dDPKP8QWfa84hWu4A
Choo Mai Zoo Zoo
Chiang Mai Zoo, izay mety tsara eo am-pototry ny tendrombohitra Doi suthep, miaina karazana biby mihoatra ny 400, anisan'izany ny tigra fotsy tsy fahita firy, koalas, rameva, liona ary biby maro hafa.
Ny karatra mitsidika an'io zoo io dia pandà roa nentina teto Chine tamin'ny 2003. Ny anarany dia Lin Hui sy Zhuang Zhuang. Ary tamin'ny taona 2009 dia nanan-janaka izy ireo Lin Bing (niseho noho ny famonoana voajanahary).
Tsara homarihina fa ny pandas dia tsy fananan'ny zoo, ary mipetraka eto ambony. An'i Chine izy ireo.
Ary koa, ny zoo dia manana aquarium lehibe (ny lehibe indrindra any Azia), ny halavan'ny tonelina izay misy 133 m. Mila mandoa vola be ianao vao mahazo azy.
Ny fampisongadinana hafa an'i Chiang Mai Zoo dia tranobe ranomandry miaraka amin'ny mari-pana tsy miovaova 5 grama. , fidirana izay mampiditra ihany koa ny saram-pitantanana.
Tsara homarihina fa miaina amin'ny takelaka malalaka ny biby. Avy amin'ny mpitsidika izy ireo dia misaraka amin'ny moaty misy rano, na tsy misy rano, fa ny iray izay tsy afaka hitsambikina.
Araka ny filazan'ny ankamaroan'ny zoo, tsara indrindra any Thailand! Ilaina ny mametraka andro iray feno mandritra ny fitsidihana, na roa mihitsy!
Sarintany Chiang Mai Zoo
Vidiny ao amin'ny Zoo Chiang Mai
Ny tapakilan'ny olon-dehibe ho an'ny zoo 150 baht
Ankizy - 70 baht
Fidirana amin'ny aviary miaraka amin'ny pandas - 100 baht
Aquarium ho an'ny olon-dehibe - 520 baht
Akademia ho an'ny ankizy - 390 baht
Trano ranomandry ho an'ny olon-dehibe - 150 baht
Trano ranomandry ho an'ny ankizy - 100 baht
Azo atao ny mamahana biby maro. Ny vidin'ny famahanana - 20 baht
Misy koa ny trano fisotroana kafe amin'ny faritany misy vidiny mirary.
Ora fiasana zoo
Misokatra isan'andro ny zoo. from 8.00 to 17.00
Asehoy amin'ny biby:
Ny andro faran'ny herinandro: 11.00 sy 15.00
Rehefa faran'ny herinandro: 11.00, 14.00, 15.30
Fampahalalana mifandray. Aiza
Address: 100 Huaykaew Rd, Tambon Su Thep, Distrikan Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50200, Thailandy
Tranonkala Chiang Mai Zoo - http: //www.chiangmai.zoothailand.org/
telefaonina: + 66 53 221 179
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/6zUpRTS4cSPZLPst5
Tempolin'i Chiang man (Wat Lehilahy Chiang)
Misy sarina Buddha taloha tranainy ao amin'ity tempoly ity. Ny iray amin'izy ireo dia 1 800 taona, ny 2 500 taona hafa. Ny voalohany dia ny an'ohatra quartz an'ny Buddha Pra-Seh-Taang Kamanee (ny mpino dia manome azy io ny fahafahana hiteraka orana). Ny faharoa dia ny sarivongan'i Buddha Phra Sila Khoa, vita amin'ny marbra ary nentina avy tany India.
Prices sy ora fiasana
Ny fidirana mankamin'ny tempoly dia maimaim-poana.
Mazava ho azy fa raisina an-tanana ny fanomezana, nefa an-tsitrapo tanteraka.
Misokatra miaraka amin'ny tempoly 6.00 mankany 17.00
Aiza no misy azy. Ahoana no hahatongavana any. Antsipiriany momba ny fifandraisana
Chiang Man dia miorina amin'ny lalana Rajpakinai any Chiang Mai.
Address: 171 Ratchapakhinai Rd, Tambon Si Phum, Distrikan Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50200, Thailand
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/zkfPjXeKxq3DMa3P7
Raha adika mivantana dia tempolin'ny stupa lehibe ity.
Izy io koa no trano avo indrindra any amin'ny faritra taloha an'i Chiang Mai ary iray amin'ireo trano malaza indrindra any amin'ny faritra avaratr'i Thailand.
Ny tempoly dia naorina teo amin'ilay toerana izay, araka ny angano, ny King Mengrai the Great dia maty tamin'ny 1317, nosedrain'ny tselatra. Izy dia mpitondra niavaka iray izay, izay afaka 60 taona mahery tamin'ny nitondrany dia afaka nampiray ny olona tsy nitovy ho lasa fanjakana iray tao Lanna. Tamin'ny 1545 Ilay horohoron-tany no nanimba ny tafo ny tempoly, ary hatramin'izay dia tsy mbola tafaverina mandraka androany.
Aiza no misy azy. Ahoana no hahatongavana any. Kontaty. Fomba fandidiana.
Misokatra isan'andro ny tempoly. from 8.00 to 17.00
teny maimaim-poanafa ny fanomezana amin'ny habe rehetra dia raisina
Chedi Luang no misy ny foibe ara-tantara an'i Chiang Mai, eo amin'ny làlana Prapoklao.
Address: 103 Prapokkloa Rd, Tambon Si Phum, Distrikan Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50200, Thailand
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/8YFkMA9VH85t398R6
Temple Phra Singh (Wat Phra Singh)
Iray amin'ireo tempoly lehibe indrindra sy be voninahitra indrindra ao Chiang Mai ary mirakitra ny fomba maritrano amin'ny taonjato 14-15 tamin'ny taonjato.
Ny tempoly dia ahitana sarivongan'i Buddha amin'ny endrika liona, araka ny fampahalalana tsy voamarina, nomen'ny mpanjakan'i Sri Lanka azy.
Misy monasitera miasa any amin'ny tempoly. Noho izany, ao amin'ny faritr'i Wat Phra Sing dia afaka hihaona moanina maro. Raha tianao dia afaka miresaka aminy foana ianao.
Ny tempoly dia hoso-doko miaraka amin'ny frescoes izay mampiseho ireo sary isan'andro isan'andro amin'ny fandraisan'ny mponina ao amin'ny fanjakana fahiny an'i Lanna.
I Chiang Mai no renivohitr'i Lanna tamin'ny fotoana nananganana ny Tempolin'i Phra Sing.
Vidiny ao amin'ny tempoly. Fomba fandidiana
Azonao atao ny miditra ao amin'io tempoly io maimaimpoana, omena an-tsitrapo ny fanomezana rehetra.
Misokatra amin'ny 6 ka hatramin'ny 17 ny tempoly.
Phra Sing dia hita ao amin'ny afovoan'i Chiang Mai "taloha" eo amin'ny sampanan-dalan'i Singharaj sy ny Rajdamnern Streets.
Address: 2 Samlarn Rd, Phra Sing, Distrikan Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50280, Thailandy
telefaonina: +66 53 416 027
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/mX6pgTJWVp4pE48E6
Tempolin'ny volafotsy Wat Sri Suphan (Wat Sri Suphan)
Hita eo amin'ny làlan'ny mpanao asa volafotsy izany ary tsy mahagaga raha “volafotsy” ilay tempoly. Izy tena naorina tamin'ny volafotsy.
Mazava ho azy, ireo rafitra manohana dia vita amin'ny fitaovana matevina sy lafo vidy kokoa, na izany aza, ny sary manan-danja indrindra amin'ny tranobe lehibe dia natao tamin'ny volafotsy volafotsy manjavozavo.
Ny rindrin'ny tempoly dia misy sary hosodoko milaza ny toetran'ny Lanna taloha. I Wat Sri Suphan ihany koa dia vita amin'ny endrika marisika an'ny Lanna. Ny lehilahy ihany no mahazo miditra ao amin'ilay tranobe volafotsy, tsy mahazo miditra miditra ny vehivavy.
Ireo takelaka misy soratra voaravaka ny fanoratana ity tempoly ity dia atao mivantana any amin'ny faritaniny. Indraindray mandritra ny fitsidihanao dia azonao atao mihitsy ny mijery tsara ny asan'ny tompo.
ihany koa Eo amin'ny faritry ny complexe dia misy Sekoly iray anaovana fisaintsainana, izay misy mahay manao zatra.
Tempolin'ny volafotsy Wat Sri Suphan ao anatiny
Fidirana mankany amin'ny tempoly - 50 baht
Nisokatra niaraka tamin'ny tempoly 6.00 mankany 18.00
Ny tempoly dia misy ao atsimo andrefan'ny Chiang Mai, 200 metatra avy amin'ny rindrin'ny tanàna taloha.
Address: Wua Lai Rd, distrika Haiya, Distrikan'i Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50100, Thailand
telefaonina: + 66 53 274 705
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/asdRthqf8h2DE4bs6
Tempolin'i Burmese Wat Sai Moon Myanmar
Ity tempoly ity dia toa tsotra sy tsotra nefa mifanohitra amin'ilay ambadiky ny trano mirehitra kokoa izay voalaza etsy ambony. Na izany aza, manana ny tsirony manokana.
Naorina tamin'ny fomba Burmazy ny tempoly, somary hafa noho ny Thai. Raha jerena: Burma, Myanmar izao.
Raha manam-potoana ianao dia mendrika ny hoentinao ny mason-jiro.
Aiza no misy azy. Fifandraisana. vidin'ny
I Wat Sai Moon Muang no misy ny faritra tranainy ao Chiang Mai, eo amin'ny zoro atsimo-atsinanana.
Address: 103 Mun Mueang Rd, Phra Sing, Distrika Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50100, Thailand
Tempolin'i Wat Buppharam
Ny Tempolin'i Wat Bupparam dia naorina tamin'ny 1497 ary nandritra ny fotoana lava sy manankarena amin'ny endriny ivelany dia misy ny fifangaroan-tsoratry ny Burmese, Thai ary Lannes miaraka amin'ny mozika teak mahavariana.
Karazana ara-kolontsaina iray no noforonina tao amin'ny faritanin'i Wat Bupparam. Eto ianao dia afaka mankany amin'ny tranomboky ny tempoly (na dia kely aza ny isan'ny boky ao).
Tsara homarihina fa ny fidirana rehetra amin'ireo tranobe ao amin'ny tempolin'ny tempoly dia arovan'ny biby angano isan-karazany Makara (ilay biby hindoa avy amin'ny angano, tompon'antoka amin'ny fiterahana). Ny Tempoly koa dia voaravaka amina dragona sy andriamanitra Thailandey nentim-paharazana, ary ny sasany amin'izany dia nindramina tamin'ny Hinduism sy Taoism.
Eo amin'ny fidirana dia voasoratra fa ao amin'ny Temple of Sunset dia mitahiry ny sarivongan'i Buddha lehibe indrindra any Thailande, vita amin'ny hazo teak.
Misy koa ny lohataona masina. Marina fa noho ny antony sasany tsy avela hitsidika azy ny vehivavy, na izany aza, ny lehilahy rehetra, na inona na inona fivavahana, dia afaka manasa sy misotro rano ao aminy.
Fidirana mankany Wat Bupparam dia: 20 baht
Ary koa, tsy misy hanohitra ny fanomezanao
Ity tempoly ity dia misy 200 metatra avy amin'ny vavahady atsinanan'i Chiang Mai taloha.
Address: 143 Thapae Rd, Sub-district Chang Khlan, Distrikan Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50300, Thailand
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https: //goo.gl/maps/Roq8EobUDiu2Tz2p6
Mozean'ny bibikely manerantany sy zava-mahatalanjona
Tranombakoka tsy miankina tsy mahazatra izay noforonin'ny mpivady tokana, izay nanokanan'ny mpivady-mpamatsy vola ny androm-piainany tamin'ny fandinihana ny moka sy ny bibikely hafa, ary ny vadiny dia manam-pahaizana manokana momba ny aretina toy ny tazomoka.
Ao amin'ny tranombakoka ianao dia afaka mahita fitambarana be dia be, izay ahitana bibikely, mineraly manana endrika am-boalohany, ary koa sary hosodoko hafahafa avy amin'ny mpivady izay manana tranombakoka.
Ary ao amin'ny tranombakoka ihany koa ny fosses ireo repoblika taloha, sarin'ny bibikely taloha. Ary misy vato misika ao amin'ny tranom-bakoka, toy ny tapa-meteorite iray izay mifanentana amin'ny bikan'ny mason'olona, ​​na vato amin'ny endrik'olombelona, ​​lozisialy mitomany, maminany ao anaty tapa-kazo, sy ny maro hafa.
Vidiny ao amin'ny tranom-bakoka. endri-javatra
Fidirana Museum 300 baht
Fahazoan-dàlana sary - 100 baht
Misokatra ny tranom-bakoka from 10.00 to 16.00
Ny mampiavaka azy dia misy sampana ao amin'ny faritany Chiang Mai, ao amin'ny tranon'ny tompon'ny tranombakoka ity tranom-bakoka ity. Aiza no ahafahanao mitsidika voalohany? Ny vidin'ny fidirana dia 100 baht. Ny trano koa dia manana zavatra ho hita, ary ny tompony dia olona mifampiresaka mahaliana. Ho fankasitrahana ny fitsidihana dia hahazo karatra nosoniavin'ny tompony ianao, ary fihenam-bidy 100 mahasoa amin'ny fitsidihana ny tranombakoka lehibe.
Address: 72 Siri Mangkalajarn Rd, Suthep, Distrika Mueang Chiang Mai, Chiang Mai 50200, Thailandy
telefaonina: + 66 66 53 211 89
Tranonkala ofisialy https://www.thailandinsect.com/
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - Sokajys://goo.gl/maps/HtAYoj5M8TRv4g9U7
Mirakitra fampahalalana mahasoa maro ilay lahatsoratra. misaotra
Izahay dia miezaka. mety hisy fanontaniana, azafady mba mifandraisao. Betsaka ny fampahalalana, tsy azo atao ny mametraka
Raha mbola tsy teo amin'ity tanàna ity ianao dia tsy mahalala intsony ianao sy Thailand.
Foibem-kolontsainan'ny firenena izy io, lavitra ny mpizahatany atsimo Thailand, na ara-jeografika na ara-tsaina.
Ny olona tsara tarehy toy izany, ny toetra mandanjalanja sy tsara tarehy, toe-piainana milamina toy ny any Chiang Mai, tsy hahita any an-kafa any Thailand ianao!